Mejupụtara na nhazi ọkwa nke ihe Ịgwakọta akụrụngwa - China Shandong QianBaidu
Special Tower kreenu
QTZ usoro Tower kreenu
Ewepụghị isi Tower kreenu
Luffing usoro Tower kreenu
FZQ Tower kreenu
Mejupụtara na nhazi ọkwa nke ihe Ịgwakọta akụrụngwa
Mejupụtara nke ihe Ịgwakọta osisi
Concrete Ịgwakọta ngwaọrụ bụ simenti, nchịkọta, mmiri, admixture, admixture na ngwaọrụ ndị ọzọ dị na chọrọ nke ihe ruru n'ihe, na mgbe ahụ kpaliri n'ime a ihe igwekota set ngwá, a maara dị ka ihe Ịgwakọta osisi (n'ala). Concrete Ịgwakọta ngwaọrụ tumadi site na ihe onwunwe na-ejizi ngwá, ihe nchekwa ngwá, atụ ngwá, agwakọta ngwá na akara usoro ndị ọzọ mmiri. Tinyere ihe, nchịkọta, ciment, admixture, mmiri, nwekwara na na.
Nhazi ọkwa nke ihe Ịgwakọta akụrụngwa
(A) site agagharị nhazi ọkwa
1. Mobile Ịgwakọta ojii
Nke a Ịgwakọta ojii na-emekarị na a na-eje ije ngwaọrụ, nwere ike bufee n'oge ọ bụla, agagharị dị mma. Tumadi emegharị ụfọdụ ruo nwa oge ma ọ bụ nke ukwuu mobile oru, dị ka okporo ụzọ, àkwà mmiri na na.
2. ntikpọ nke agwakọta ojii
Nke a Ịgwakọta osisi a kpọkọtara ọtụtụ nnukwu mmiri, nwere ike kpọkọtara na disassembled na a obere oge, na nyefe nke na-ewu na saịtị. Tumadi eji na azụmahịa ihe ụlọ mmepụta ihe na nnukwu na-ajụ-sized ihe ewu.
3. ofu agwakọta n'ala
Nke a bụ nnukwu ihe Ịgwakọta osisi na nnukwu mmepụta ike, bụ-eji na azụmahịa ihe ụlọ mmepụta ihe, nnukwu prefabricated osisi na mmiri Conservancy ewu na saịtị.
(B) dị ka mmepụta usoro nhazi ọkwa
Concrete Ịgwakọta ngwaọrụ dị ka ukwuu nke ya technology nwere ike kere n'ime otu-ogbo na abụọ-ogbo ikpehe iba.
(C) ọzọ nhazi ọkwa ụzọ
Concrete Ịgwakọta ngwaọrụ na mgbakwunye na nke n'elu abụọ iche iche nke-ejikarị ụzọ nke nhazi ọkwa, kamakwa dị ka ma nhazi nke agwakọta ngwá na tinye mmiri agwakọta n'ime akọrọ ihe onwunwe batching ojii na mmiri Ịgwakọta ọdụ, dị ka hazi na-aga n'ihu nri nke agwakọta ngwá ekewa na-aga n'ihu Ịgwakọta ojii na Abụọ Ịgwakọta ojii.
Post oge: Feb-08-2018
Okwu: Ụlọ ahịa 418, Block B, Fortune Building, Hong Kong Street, Zhangqiu, Shandong, China (Chile)